Ny Semalt Expert Shares Misy lisitry ny fitaovana fanasokajiana tranonkala
Na tsy maintsy manangana tranonkala ianao na mila maka ny fehezinao RSS Raha marina, ilaina ary marina ny angon-drakitra, azonao ampiasaina ny fandaharana scraping sy fandraketana rakitra.
Raha te-hanangona ny angona vokarin'ny vokatra avy amin'ny tranonkala tsy tapaka ianao, dia tsy maintsy misafidy an'i Mozenda ianao. Ary raha mila mikaroka portails isan-karazany, tranonkala media sosialy, ary famoaham-baovao ianao, dia tsara indrindra ho anao i Uipath sy Kimono.
Miaraka amin'ireto fitaovana 3 ireto dia afaka manamboatra tetikasa fanodinana endrika ianao ary afaka manao fikarohana amin'ny Internet.
Kimono dia fitaovana malaza amin'ny angona angon-drakitra sy rindrambaiko mipetaka. Tsara ho an'ny olona te-hampiasa ny angon-drakitra mivantana ny orinasanao, ary tsy mila fahaiza-manao koditra ianao mba hahazoana tombony amin'ny Kimono. Afaka mamonjy ny fotoananao izy ary mameno ny tranokalanao miaraka amin'ny angon-drakitra. Tsy maintsy maka sy mametraka ity fitaovana ity fotsiny ianao, asongadino ireo singa ao amin'ny pejy ary manome ohatra sasantsasany ahafahan'i Kimono manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy. Izany dia fandaharanasa maimaim-poana miaraka amin'ireo endri-javatra samihafa ary mety tsara ho an'ireo orinasa sy mpikirakira aterineto. Ny Kimono dia mametaka ny rakitrao ao amin'ny format JSON sy CSV ary mamorona API ho an'ny tranonkalanao, amin'ny fitazonana azy ireo tahirin-kevitra ao anaty tahiry ho an'ny fampiasana aoriana. Tsy mitaky navigateur pejy izy io ary mampihena ny asa fanodinana ataonao.
Mozande dia fampiharana Desktop sy programa fanesoana maimaim-poana. Manampy antsika hanala ny angon-drakitra rehetra avy amin'ny tranonkala tsy voafetra. Ity serivisy ity dia hitondra ny tranonkala rehetra ho loharanom-baovao azo antoka, ary tsy mila manana fahaizana manokana momba ny programa ianao mba hahazoana tombontsoa avy amin'i Mozenda. Efa nomanin'ny mpikarakara programa maro sy ny manam-pahaizana SEO izany. Ilainao fotsiny ny mandefa ny pejy web anao ary avelao i Mozenda hanatanteraka ny andraikiny. Afaka miditra mora amin'ny API an'i Mozenda ianao ary mahazo fampahalalana marina. Izy io dia hitarika antsika amin'ny alàlan'ny dingam-pikirakirana amin'ny alàlan'ny screenshotsa ary ahafahana manolotra pejy an-jatony an'arivony ao anatin'ny adiny iray. Ity programa ity dia mora ampiasaina ary tsy mitaky fahaizana ara-teknika amin'ny ankapobeny. Indraindray, i Mozenda dia afaka manaparitaka ny angon-drakitra sy manova ny pejin-tranonkalan'ny pejy mandritra ny 24 ora, ary izany no tsy fahampian'ny fitaovana.
Manokana i Uipath amin'ny famoronana pejy web sy tranonkala maro ho an'ny mpampiasa. Izy io no iray amin'ireo fandaharam-pamokarana amam-pahaizana azo itokisana sy tsara indrindra indrindra. Izy io dia tonga lafatra ho an'ny mpaka sary sy mpamorona tranonkala ary mora kokoa noho ny fanamboarana ny angona angon-drakitra toy ny pejy navigation. Tsy ny pejy web-nao ihany no manala azy fa ny tahiry PDF hafa ihany koa. Ianao ihany no mila manokatra io web mpangalatra sy manasongadina ny fampahalalana ilainao hosimbana. Uipath dia hanodina tranonkala an'arivony ao anatin'ny ora iray, hanome anao ny angon-drakitra marina sy ny vaovao farany amin'ny sehatra tsirairay Source .